I-Kasper Schmeichel Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Kasold
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseDenmark I-Kasper Schmeichel Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Kasold
I-LB iveza iNqaku elipheleleyo leNqaku eliLisayo lokuGqibela ngegama lesidlaliso "Indlela enkulu". Ibali lethu leKasper Schmeichel yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuvuka kweKasper Schmeichel. Ityala leFoto: Iibhola zebholaTopTen, DailyMail, Twitter kwaye Twilley
Uhlalutyo / ukugeleza kubandakanya impilo yakhe yasebuntwaneni / imvelaphi yosapho, imfundo / ukwakha umsebenzi, ubomi bekamva lomsebenzi, indlela eya kudumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubomi bobuhlobo, ubomi bomntu, iinyani zosapho, indlela yokuphila kunye nezinye iinyani ezingaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungunyana wentombazana yangaphambili yaseManchester United kunye neDanish Legend yamazwe angaphandle uPeter Schmeichel. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biography kaKasper Schmeichel enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - Imvelaphi yoSapho kunye noBomi baKudala
UKasper Peter Schmeichel wazalwa ngomhla we-5th we-5 ngo-Novemba 1986 kunina u-Bente Schmeichel (ongumgcini wendlu) kunye noyise uPeter Peter Schmeichel (umGcisa we-Legendary) kwisixeko saseCopenhagen, eDenmark. Dibana nabazali bakaKasper Schmeichel apha ngezantsi.
Dibana nabazali bakaKasper Schmeichel- uPeter noBente. Ityala lemifanekiso: BillBladet
Umvelaphi wosapho: UKasper ngotatomkhulu wakhe (Imvumi yaseDanish) Inengcambu yentsapho yakhe Pholend kwaye HAYI Dominikha abalandeli abaninzi bebhola beqhelile. Ubusazi?… Utat'omkhulu wakhe ogama linguTolek Schmeichel wafudukela eDenmark ejikeleze i1960. Umzukulwana kaKasper (Tolek) wayengumntwana osemfazweni owayenotata wakhe (Umzukulwana kaKasper) wabulawa njengeSoldier yasePoland ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Umzukulwana wakhe omkhulu ukuba yiSoldier kuthetha ukuba usapho lukaKasper Schmeichel luneengcambu zomkhosi.
Tolek (Umkhuluwa kaKasper) washiya iPoland waya eDenmark apho umfazi wakhe wamzalela khona kwaye wakhulisa unyana wakhe weNtsumpa uPeter Schmeichel. Oku kuqina kwengqondo eluhlaza okwezingcambu zosapho zomkhosi, zidibene nomzimba onamandla yagqithiselwa kuPeter Schmeichel owayisebenzisayo ukwenza igama ebholeni emva koko wagqithisela zendalo kunyana wakhe amthandayo uKasper.
Inqaku likaPeter Schmeichel wayengu-22 xa umfazi wakhe uBente wazala uKasper, wamenza ukuba abe nguyise okokuqala. U-Kasper omncinci njengoko kubonwe ngezantsi wayehlala ubomi obucothayo kuba utata wakhe wayedumile. Wayeluhlobo lomntwana olunabazali bakhe Nika ingqokelela yeethoyi ezintsha. UKasper akakhulelanga yedwa, kodwa ecaleni kukadadewabo ogama linguCecilie Schmeichel. Apha ngezantsi kukho umfanekiso wosapho oluhle ngexesha le-1990's yokuqala.
Ifoto kaKasper Schmeichel Family ngexesha le-1990s yokuqala. Ityala elinomfanekisoUGqr
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - I-Career Buildup kunye neMfundo
Ikamva eliZimiseleyo: Ngorhatya oluhle ngehlobo kunyaka we-1991 ngaphambi kokujoyina i-United, utata kaKasper, uPeter Schmeichel wayekwiqela lakhe lebhola ekhatywayo (Brøndby IF) iklabhu yakhe yebhola yeligi yesihlanu. Ugqibe kwelokuba netheko elincinci, emema undwendwe lwakhe uninzi lwalo lwalungabalandeli beklabhu.
Njengoko abalandeli babamenyiwe kwaye bangena embuthweni, uKasper Schmeichel oneminyaka eyi-4 wema phambi komnyango wesango enobuso obucacileyo esithi kwezi ndwendwe, "Nonke aningena apha!".........."Ewe sivunyelwe, samenywa ngutata wakho”Uphendule omnye wabo njengoko wayebuyisa uKasper kunina ngononophelo, ebavumela abalandeli bakhe ukuba bangene. Iqela laqhubeka kwaye kwiiveki ezimbalwa kamva, uPeter Schmeichel waqhubekeka nomsebenzi wakhe ngempumelelo eManchester United.
Ukukhawuleza phambili kweminye iminyaka ye-25 kamva, uKasper akazange abonwe eme ngendlela yeendwendwe-EMVA ngeli xesha, ngendlela yazo zonke iintlobo zabachasi bebhola ezijolise ukubeka ibhola emva kwakhe. Ngoku makhe sikunike ibali elifutshane malunga nokuba luqale njani uhambo.
Yintoni eyamshukumisela ukuba alandele iinyawo zikaYise: Kwiminyaka ye-7 kunye ne-8, ngonyaka we-1992 kunye ne-1993, utata kaKasper wavota I-IFFHS yeyona Kosi yeHlabathi eBalaseleyo. Ukuba notata ngubani hayi oyena mntu ubalaseleyo kwi-world world, kodwa omnye okhokele uthotho lwezihloko kunye neManchester United, kwakulula ku Kasper omncinci ukulandela emanyathelweni katata wakhe.
Impumelelo yamakhondo omsebenzi kaPeter yashukumisela uKasper ukuba alandele emanyathelweni akhe. Ityala elinomfanekiso IScandinavianTraveler, yaye The42
UKasper uchithe ixesha lakhe elininzi ebuntwaneni ekonwabela impumelelo katata wakhe. Waqala ukufunda eNgilani ngenxa yokudlala kukatata wakhe. UKasper wayenemfundo yamabanga aphantsi Isikolo saseHulme Hall Grammer ikwiGreater Manchester. Wayezinikele kwezemidlalo ngelixa efunda iincwadi zakhe. Emva phaya ngexesha lokuphuma kwesikolo, uKaper wadlala ibhola ekhatywayo kunye nabahlobo bakhe phakathi kwabo UAlex Bruce-Unyana kaKasper katata owayengumlingani weqela laseManchester United Steve Bruce.
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - Ubomi bokuqala
Ngelixa abanye abantwana bebhola bebhola bebhola beqala umsebenzi wabo ngokujoyina i-football academy, uKasper waqala phantsi kolawulo lukatata wakhe. Ulawulo lweManchester United lwamvumela ukuba alandele utata wakhe odume ngokuziqeqesha. Kwangoko, wayekuthanda ukuma emva kwepali ngelixa iManchester imanyanisa amabali e-lean. UKasper wayebaleka eyokulanda i-wayward shots eyayiphosile injongo kwaye aqhubeke ukuya kumdlalo ngamnye e-Old Trafford eyaziwayo.
Utata kaKasper Schmeichel wayigqiba imisebenzi yakhe yaseManchester United kwelona nqaku liphezulu emva kokuba ekhokele i-United ukuphumelela i-1999 Treble. Kwiminyaka ye-36, uPeter wafuna isantya esincinci sebhola ePortugal (Sporting CP), uphuhliso olwalubona lonke usapho lakwaSchmeichel kubandakanya noKasper omncinci eshiya iNgilani esiya ePortugal.
Ngonyaka we-2000, ngelixa uKasper wayehlala nabazali bakhe ePortugal, wazifumana wabhaliswa kwi-Estoril football academy eyaziwa njenge I-Grupo Desportivo Estoril. Xa wayefunda, uKasper wayeqhubeka elandela iinyawo zikatata wakhe. Amaxesha amaninzi emva kweeseshoni zoqeqesho, wayeya kuqhubeka efumana izifundo ezongezelelweyo kutata wakhe kwi-Sporting CP. Oku kwenzeke unyaka wonke we-1999 ukuya kwi-2001.
UKasper Schmeichel wafunda lukhulu kutata wakhe ngexesha lakhe lobutsha. Ityala elinomfanekiso M80
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Emva kweminyaka emibini ePortugal, usapho lakwaSchmeichel laziva lixesha lokuhlala kweli lizwe. Kwakhona, uKasper wagqiba kwelokuba ashiye iklabhu ngeli xesha, elandela utata wakhe ukubuyela eNgilani apho waqala wadlalela iAston Villa. UKasper watyikitya neMan City kwaye emva kweenyanga ezithile, waphinda wadibana notata wakhe, kwesi isihlandlo kwiklabhu enye. Ubusazi?… Bobabini utata kunye nonyana benza imbali ngokuba ngabokuqala begoli abadlalela iMan City academy kunye neqela eliphakamileyo kunyaka we-2002.
Ifoto enqabileyo kaKasper Schmeichel noyise uPeter xa bobabini babedlalela iManchester City ngonyaka we-2002. Ityala lemifanekiso: TheGuardian
Xa i-Going Got Tough yeKasper: Kuba ebengekabi sivuthiwe ngenxa yokuthweswa isidanga kunye ne-academy, uKasper wayengenakuzalisa ngokulula izihlangu zikatata wakhe kwangoko emva kokuba ethathe umhlala-phantsi kunye neSixeko kwaye esuka kwibhola ekhatywayo nge2003 ngonyaka. Ukungakwazi ukulinda, iSixeko sahamba saya kuthenga uDavid James ogcwalise indawo kaPeter Schmeichel.
Emva kokuphumelela ibhola ekhatyweni, uKasper ocinga ukuba uza kuhamba ngesikhephe kumdlalo webhola ekhatywayo akazange azibone izinto zimhambela njengoko kwakucwangcisiwe. Okwelo xesha, indawo eyayisenziwa kwindawo ephezulu yayigcina indawo Joe Hart owayekhuphukile eqinile kwaye ebonwa engenakuchazeka. Olu phuhliso lushiye ihlwempu iKasper ekukhathazekeni.
IKasper Schmeichel- uJoe Hart Imbangi. Ityala lemifanekiso: Iplanethi yeFlootFootball. Ityala: Iplanethi yeFootball
Ukuba nempumelelo engaphezulu kule minyaka idlulileyo, bekunzima kusapho lakwaSchmeichel ukujongana nokubona ngokwabo besihla i-odolo e-East Coast. Ukujonga ezinye iinketho, uKasper Schmeichel waqala ukuhamba ngokusebenzisa iinyoka kunye namanqanaba awahlukeneyo ukuze aqondwe njengomntu ozinikezele kwiqela lokuqala. Uhlawule iindleko zakhe ngokuya kwimali mboleko ukusuka kwi-2006 ukuya kwi-2009 kwaye uqalise umsebenzi wakhe omkhulu ngokukhawuleza Ingcwaba, Falkirk kunye neNotts County kunye neLeeds.
Ekugqibeleni kwasinda umhlanguli. Ngeli xesha, yayingenguye utata wakhe omkhulu, kodwa umphathi we-Notts County, uSven-Göran Eriksson owamncedayo wakhusela indima yeqela lokuqala kwi-Leicester. Uqinisekisile u-Kasper, umntu owayethembene naye kwi-27th kaJuni 2011.
USven Goran Eriksson uncede uKasper Schmeichel akhusele indawo yakhe eLeicester emva kokuba isibini sisebenze kunye kwi-Notts County. Ityala elinomfanekiso DailyMail
Ubusazi?… KwakunguSven-Göran Eriksson owayephethe i-Ivory Coast kwindebe yehlabathi ye-2010 yeFIFA.
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
UKasper Schmeichel ubuyisele ububele kumphathi wakhe ngokumnika i-17 amashiti acocekileyo kunye nokusindisa izohlwayo ezine kwimidlalo ye-52 iyonke. Ukudlala kwakhe kwi-2011-12 isizini kuye kwamenza waba nguMdlali weli qela loMdlali oNyaka kunye nabaDlali boMdlali wonyaka.
Endaweni yokuthatha imali enkulu, uKasper wagqiba ekubeni ancede uLeicester afumane ukuthandwa kwibhola yeNgesi. Ngexesha le-2013-14, amashiti akhe acocekileyo alithoba kunye nomdlalo we-19-unbeaten oqhuba ixesha ukusuka ngoDisemba ukuya ku-Epreli wanceda ukuqinisekiswa kweLeicester inyhweba yeligi yeNkulumbuso kunye nemidlalo emithandathu yokuphumla.
Olona suku lukhulu kwi-Dane yeza kwi-2nd kaMeyi 2016, xa wanceda iqela lakhe ukuphumelela isihloko sePremier League kwi-29 yeminyaka yobudala. Ubusazi?… Kwakuyiminyaka efanayo kunye nosuku lwekhalenda efanayo utata kaKasper waphumelela isihloko seLigi yeNkulumbuso yaseManchester United kwi1993.
UKasper uphumelele isihloko sePremier League kwi-29 iminyaka yobudala, ubudala obufanayo kunye nemini yekhalenda efanayo xa utata wakhe waphumelela isihloko esifanayo kwi-1993. Ityala lemifanekiso: Instagram kwaye Twitter.
Ukwenza irekhodi lehlabathi, iiSchmeichels zaba nguyise kuphela ongunyana kunye nonyana ophumeleleyo kwiPremier League nokuba zikwimeko efanayo yokwenza oko. Ngexesha lokubhalwa, u-Kasper wayesandula ukwenza utata wakhe ukuba akhule ngakumbi njengoko engazange afumane ntetho ecaleni kwakhe u-0-9 ukwahlulwa eSouthampton ngomhla we-25 ngomhla we-Okthobha ka-2019.
UKasper Schmeichel wavuma iinjongo ze-0 kwi-0-9 yokudilizwa eSouthampton. Ityala elinomfanekiso Ezizimeleyo kwaye Izikhululo zeSkyS
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - Ulwalamano lobomi
Emva komgcini wegoli ophumeleleyo kuPeter, wayenonyana eKasper. Kwaye entliziyweni yeKasper, beza UTHANDO Yakha intombazana ebukekayo ebikhe yaqengqisa amehlo ngaphambi kokuba ibeyintombi ngonyaka we-2004. UStine Gyldenbrand yintokazi yaseDenmark ezelwe ngoJan 1985, okuthetha ukuba phantse yayiminyaka eyi-2 emdala kunoKasper. Wasukuma waya ku-stardom xa wayeqala ukuthandana noKasper kunyaka wokugqibela wobomi bakhe bobutsha e-2004, ngelo xesha, uKasper wayeneminyaka eyi-17 kuphela.
UKasper Schmeichel waqala ukuthandana no-Stine Gyldenbrand eneminyaka eyi-17. Umfanekiso wetyala- boha-byli
Ngosuku oluhle abadibana ngalo, uStine Gyldenbrand wayesandula ukuba ngumfundi obhalisele ukufunda isidanga kumbindi weYunivesithi yaseChester. Emva kokuphumelela kwakhe e-2009, waqala ukusebenza kwisibhedlele esikufutshane neBirmingham kwaye kunyaka olandelayo (2010), bobabini abathandi bamkela umntwana wabo wokuqala, unyana awathiya igama elinguMax Schmeichel. Kwiminyaka emibini kamva (2012), babeno-Isabella Schmeichel.
Dibana noMfazi kaKasper Schmeichel, uStine Gyldenbrand unyana wakhe, uMax Schmeichel kunye nentombi, u-Isabella Schmeichel. Imifanekiso yetyala- Pinterest
UKasper wayethandana nentombi yakhe kunye nonina wabantwana bakhe kwiminyaka ye-11 ngaphambi kokuba athathe isigqibo sokuphakamisa kwaye abophe iqhina kunye naye. Zombini izithandwa zatshata kwi-2015 kwindawo edumileyo I-Egebæksvang Kirke Church ibekwe kwilokishi yabo eDenmark. Umsitho wawunamalungu onke osapho awayezimase.
UKasper Schmeichel obenomfanekiso kunye nomfazi wakhe ngosuku lwabo lomtshato. Ityala elinomfanekiso UBaomoi
Ukusukela emva komtshato wabo, uStine wayeqhubele phambili kwimfundo yakhe. Kutshanje uye wagqibezela imfundo yakhe njengomqeqeshi ongumntu ukuphuhlisa ulwazi lokunceda abantu basetyhini abakhulelweyo kunye nasemva kokuzalwa komntwana bafezekise impilo esempilweni. Ngexesha lokubhalwa, uStine okwangoku uqhuba iziseko ezibini ezibiziweyo; I Isiseko seGyldenbrand Schmeichel kwaye fodboldfonden nomyeni wakhe kunye nomhlobo wakhe, uChristine Kvist.
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - Ubomi bomntu
Ukwazi i-Kasper Schmeichel Iinyani zoBomi bakho kwisandi kuya kukunceda ufumane umfanekiso wobuntu bakhe.
Ukwazi uKasper Schmeichel uBomi baBantu off-the-Pitch. Ityala elinomfanekiso Twitter
Ukuqala ukuqala, uKasper ngumntu onobuchule, onesibindi kunye nothando. Uyinkokeli eyinyani ezinikele kakhulu kwinto eyenzayo kokubini nasekuphumeni kwayo. UKasper uyakwazi ukuzivumelanisa ngokulula ngakumbi neendlela ezahlukileyo zokuziphatha zomntu ingakumbi ukukrokra esidlangalaleni ngokumthelekisa kutata wakhe. Ngokutsho Guardian,
“Ukufuna ubomi njengomntu osukelayo kweyona njongo khange kube yeyona nto ilula. Okwangoku, abantu abangabaziyo beza ne-wisecrack malunga nokuba ndingaze ndilunge kangakanani njengasekuqaleni kukaBawo. Ukugwetywa ngolu hlobo yinto endizame ukuyiphila ndedwa ngasese. ”
Ukuba ngumntu wakhe, nokuba neempawu zakhe, indlela yakhe, indlela yakhe, amabhongo akhe yile nto ifunwa nguKasper.
Ngaphandle kokuba yi-32 (ngexesha lokubhalwa) kwaye unabantwana ababini, abantu basayibona iKasper njengonyana we-someones. Nangona kunjalo, usakholelwa ekubeni baninzi abalandeli abancomayo ngezinto azenzileyo ngaphandle kokuthetha okanye ukwenza ihlazo.
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - Ubomi Bentsapho
Intsapho yakwaSchmeichel yenye yezona ntsapho ziphumeleleyo zeDenmark ezihlala e-United Kingdom. Yintsapho encinci enecala lenyukiliya embindini webhola. Lungu ngalinye lekhaya leSchmeichel zizithethi zomthonyama zozibini iilwimi zeDanish nesiNgesi (isi-Afarikhi nesiNgesi).
UKasper Schmeichel Amalungu osapho abhiyozela isihloko sakhe sePremier League. Ityala elinomfanekiso isipili
Malunga noTata kaKasper Schmeichel: Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uPeter Schmeichel wayengowona mgabi ugqwesileyo wehlabathi kunye nembali yeligi yeNkulumbuso njengoko kubonwe ngexesha lakhe eManchester United. UPeter waphila ngalo lonke ixesha Sir Sir Ferguson's ixesha legolide eManchester United. Igama "enkulu Dane'Wayedume ngeenwele zakhe ezimhlophe, isakhelo esikhulu kunye nesitayile esinokufezekiswa kweenjongo.
Kuyamangalisa ukuba unyana kaSchmeichel uKasper wazibona njengelifa isitayile sikayise kunye nentwana yesakhelo esikhulu njengoko kubhalwe ngezantsi. Bobabini utata nonyana bayahloniphana kwaye bayalile ukwenza ukuthelekisa esidlangalaleni.
Kumdlalo kaBawo kaPeter kunye nonyana kaKasper - Zombini ziyintsomi. Imifanekiso yeTyala- iscandinaviantraveler
U-Peter Schmeichel ngexesha lokubhala wahlukene no-Bente (umfazi ka Kasper) kwinto ekubhekiselwe kuyo njengesigqibo esinzima kwesi sibini. Malunga noJuni 2019, uPeter Schmeichel utshatile owayesakuba yimodeli yePl * yboy- uLaura von Lindholm emva komtshato omfutshane e-Espergærde, eDenmark. Inyathelo likaKasper Schmeichel mum, ogama linguVon Lindholm ngugqirha wezonyango okhethekileyo kunye nomdlali weqonga. Encinci iyaziwa ngesizathu sokuba uPeter Schmeichel aqhawule umtshato nomfazi wakhe.
Umtshato katata kaKasper Schmeichel. Ityala elinomfanekiso Ilanga kwaye DailyMail
Malunga noMama kaKasper Schmeichel: UBente Schmeichel unikwa ityala elikhulu ngendlela awaphatha ngayo umyeni wakhe kunye nekhaya lakhe ingakumbi xa ekwinqanaba lamandla akhe wokugcina iinjongo. Ngokungafani nomyeni wakhe kunye nonyana wakhe, yena Uthathe isigqibo sokungafuni ukwamkelwa esidlangalaleni. Nangona kunjalo, ukugweba ukusuka kwifoto engezantsi (xa uKasper ephumelela i-2016 Danish Male Player of the Year), umama ophumeleleyo ukhe wawukhumbula umcimbi, ebonisa ukuba unebhongo kangakanani ngempumelelo yonyana wakhe.
Umama kaKasper Schmeichel uye wanelunda ngokuphumelela kunyana wakhe. Ityala lemifanekiso: BT kwaye BillBladet
Malunga noDade kaKasper Schmeichel: U-Cecilie Schmeichel okhule konke kwenzeka kuphela kwesizalo sikaKasper, ngaphandle komninawa (s) no dade (s). Ngombulelo katata wakhe odumileyo kunye nomkhuluwa (ofanelwe naye ngezantsi), uCecilie uyaziqhenya ngokuthwala ifani yeSchmeichel.
Dibana noKasper Schmeichel'sista-Cecilie Pilkær Schmeichel. Ityala lemifanekiso: Instagram
Ethetha ngesibongo sakhe esidumileyo kunye nobomi bomtshato, ukhe wathi;
“Ndinesibongo esijongene nam emva kwam, bendisoloko ndibunandipha ubomi bokudumisa. Ngoku ekubeni nditshatile kwaye ngoku ndimi ngeenyawo zam, ndaphila ubomi obuqhelekileyo kwelinye icala lobomi. ”
UCecilie ngoku utshatile kunye nabantwana abathathu (uNowa noSofie) kwaye ngoku unegama uCecilie Pilkær Schmeichel. Ukwahlulela kwisithuba esisezandleni zakhe zeendaba zeNtlalontle, kubonakala ngathi ungumntu onesondlo, ibhlog kunye nomqeqeshi womzimba.
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - yokuPhila
Ukufumana umvuzo wonyaka we-7,800,000 yonyakaIngxelo ye-WTFot), kufanelekile ukuthi uKasper wenza iimali ezininzi, ezoneleyo ezenza ukuba aphile ubomi obuzolileyo. Indlela yakhe yokuphila engaqhelekanga ebambelelene ngqo ekusebenzeni kwakhe njengomdlali webhola ibonakala ngokulula kwimoto yakhe eqolileyo yeMercedes.
Inqwelo kaKasper Schmeichel- Wayeqhuba iMercedes njengakwi2017. Ityala elinomfanekiso DailyMail
Kwifoto engentla eveza eyakhe imoto engaqhelekanga, umgcini wegoli waseDenmark usandul 'ukuthatha utata wakhe uPeter ukuba aye kwisidlo sasemini kwindawo yokutyela eSan Carlo yase-Italiyane ukubhiyozela iqela le-Champions League yeqela lakhe ngokuphumelela i-Sevilla.
I-Kasper Schmeichel Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Casold - Inyaniso engekho
Intloko yeglobal yakhe Ukujonga ngokuthe ngqo ngumboneleli wase-UK weNXXUMUMX wezixhobo zoqeqesho kwezemidlalo. Inkampani isebenzisane kakhulu noKasper ukuvelisa uluhlu lweiglavu zakhe azibiza ngokuthi ''Iigloves zeSchmeichology'. Olu luhlu lwe matrix kunye neglass yeglasi yeglasi sele isetyenziswa ngabagcini bamanqindi kwiqela lebhola ekhatywayo.
I-Global Precision Schmeichology yeGloves yethiwa yiSchmeichel Family. Ityala lemifanekiso: Ukujonga ngokuthe tye
Ozuko lwonyana noYise: UKasper ongu32 ngelo xesha lokubhalwa wayenolwazi oluninzi kwi-CV yakhe kwiphepha lakhe leWikipedia. Ukujonga ezi ntlonipho zeklabhu nganye kunye neklabhu ngononophelo, akukho mdlalo ngokwentelekiso yakhe kwimpumelelo katata wakhe ongumbali osihlonitshwayo ikwaboniswa ngezantsi.
Iimbasa zeKasper Schmeichel. Ityala lemifanekiso: Ezizimeleyo
UPeter Schmeichel owayeneminyaka eyi-32 (ngokufana nonyana wakhe) kwixesha le-1994 / 1995 wayesele ephumeze okuninzi kakhulu emsebenzini wakhe. I-Wikipedia yakhe ixhasa isizathu sokuba athathelwe ingqalelo kakhulu yi-pundits yebhola, kunye nabalingane bexesha elidlulileyo kunye nabangoku njengabadlali abaphambili kwimbali yebhola yehlabathi.
UPeter Schmeichel's Indodwa kunye neeKlabhu eziHloniphekileyo. Ityala elinomfanekiso EzemidlaloJoe
I tattoo kaKasper Schmeichel: Njengomntu wezemidlalo, xa kufikwa ekufumaneni tattoo yakho yokuqala, kuyavakala ukuba umntu unokufuna into encinci, i-tattoo enokuthi ifihlwe ngokulula kwizalamane ezithile zentsapho ezifuna ukukufundisa iiyure malunga nemiphumo emibi. Oku kunokuba yimeko kaKasper. Njengoko kubonwe ngezantsi, une tattoo efihliweyo ebekwe kwelinye icala lengalo yakhe ekwakunzima ukuyibona.
I-Kasper Schmeichel tattoo. Ityala lemifanekiso: WTFoot
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leKasper Schmeichel yoBuntwana kunye neNqaku le-Biold ye-Untold. Ku- LifeBogger, sizabalazela ukuchaneka kunye nokuthe tye. Ukuba ufumanisa into engakhange ilunge, nceda wabelane nathi ngokuphendula ngezantsi. Siya kuhlala sizixabisa kwaye sihlonipha izimvo zakho.
UMartin Braithwaite Ibali lobuntwana kunye neNqaku leMbiniso yoBuntwana
I-Yussuf Poulsen Ibali leNqanaba lokuKhula kobantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Lasse Schone Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali le-Kasper Dolberg yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
U-Andreas Christensen Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Christian Eriksen Childhood Indaba I-Untold Biography Facts